OptionCoin စျေး - အွန်လိုင်း OPTION ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OptionCoin (OPTION)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OptionCoin (OPTION) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OptionCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OptionCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OptionCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OptionCoinOPTION သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000361OptionCoinOPTION သို့ ယူရိုEUR€0.000306OptionCoinOPTION သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000277OptionCoinOPTION သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000329OptionCoinOPTION သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00323OptionCoinOPTION သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00228OptionCoinOPTION သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.008OptionCoinOPTION သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00135OptionCoinOPTION သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000478OptionCoinOPTION သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000504OptionCoinOPTION သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00807OptionCoinOPTION သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0028OptionCoinOPTION သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00196OptionCoinOPTION သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.027OptionCoinOPTION သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0608OptionCoinOPTION သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000495OptionCoinOPTION သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000549OptionCoinOPTION သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0112OptionCoinOPTION သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0025OptionCoinOPTION သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0386OptionCoinOPTION သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.427OptionCoinOPTION သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.138OptionCoinOPTION သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0266OptionCoinOPTION သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00993
OptionCoinOPTION သို့ BitcoinBTC0.00000003 OptionCoinOPTION သို့ EthereumETH0.0000009 OptionCoinOPTION သို့ LitecoinLTC0.000007 OptionCoinOPTION သို့ DigitalCashDASH0.000004 OptionCoinOPTION သို့ MoneroXMR0.000004 OptionCoinOPTION သို့ NxtNXT0.0282 OptionCoinOPTION သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 OptionCoinOPTION သို့ DogecoinDOGE0.104 OptionCoinOPTION သို့ ZCashZEC0.000004 OptionCoinOPTION သို့ BitsharesBTS0.0111 OptionCoinOPTION သို့ DigiByteDGB0.0115 OptionCoinOPTION သို့ RippleXRP0.00128 OptionCoinOPTION သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 OptionCoinOPTION သို့ PeerCoinPPC0.0012 OptionCoinOPTION သို့ CraigsCoinCRAIG0.164 OptionCoinOPTION သို့ BitstakeXBS0.0154 OptionCoinOPTION သို့ PayCoinXPY0.0063 OptionCoinOPTION သို့ ProsperCoinPRC0.0453 OptionCoinOPTION သို့ YbCoinYBC0.0000002 OptionCoinOPTION သို့ DarkKushDANK0.116 OptionCoinOPTION သို့ GiveCoinGIVE0.782 OptionCoinOPTION သို့ KoboCoinKOBO0.0822 OptionCoinOPTION သို့ DarkTokenDT0.000332 OptionCoinOPTION သို့ CETUS CoinCETI1.04
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 00:15:02 +0000.